Firefox 66.0.2 inosvika kugadzirisa zvakasiyana siyana zvewebhu | Linux Vakapindwa muropa
Mugovera wadarika, Mozilla yakaburitsa Firefox 66.0.1. Iyi vhezheni yakamisikidza madudu maviri akange akanyorwa nekambani seakakomba. Iyo yekuvandudza yaive iripo yeWindows uye macOS kubva kune imwecheteyo application kana nekuodha pasi mabinaries eLinux, saka isu taive takaimirira iwo uyu Muvhuro. Kuvhurwa ikoko hakuna kuuya uye nezuro, apo isu tanga tisisina moyo murefu, yakaonekwa mune APT Firefox 66.0.2 repositories, imwe yepamusoro shanduro iyo inosanganisira akati wandei kugadzirisa.
Zvinotoshamisa kuti, tichitaura nezve APT vhezheni, Mozilla yakadarika Firefox 66.0.1 tichifunga kuti ndivo vaivanetsa nekutora mabhugi maviri akawanikwa muPwn2Own seakakomba, asi vangangodaro vakafunga kuti: «Zvakanaka, nei uchiisa vhezheni nhasi kana mumazuva 2-3 vachange vaine nyowani inogadzirisa zvese? ». Uye zvave zvakadaro. Iyo yazvino vhezheni inogadzirisa mabhugi maviri ane chekuita nekutadza kusadzima uye kwakasiyana kusawirirana newebhu zvemukati. Une ruzivo pazasi.
Firefox 66.0.2 ikozvino yave kuwanikwa muAPT zvinyorwa
Iyo rondedzero yeshanduro mune iyi nyowani vhezheni yakaderedzwa kuita matatu, kana isu tichifunga kuti yechipiri inosanganisira maviri:
Yakagadziriswa webhu inoenderana nenyaya neHofisi 365, iCloud, uye IBM WebMail inokonzerwa neshanduko dzichangobva kuitika kubata zviitiko zvekhibhodi (Bug 1538966).
Yakagadziriswa nyaya mbiri dzakakonzera kutadza kusatarisirwa (bhagi 1521370, bhagi 1539118).
Kana iwe uri kushandisa iyo Snap vhezheni, ini ndinoita yako yega kurudziro: dzokera kuAPT vhezheni. Canonical yaita kuti zviwanikwe kune vanogadzira zvese zvavanoda, asi Mozilla haisi kuita zvayaifanira kuita. Apa ndinoreva kuti haisi kuendesa zvidzoreso kuti tikwanise kuzviisa kubva kuFirefox, asi panofanirwa kuvandudzwa panowoneka chete chinongedzo kuitira kuti tikwanise kurodha pasi uye nekuwedzera mafaera acho.
La most up-to-date Snap vhezheni ichiri iyo "yekare" v65.0.2-1, saka hatigone kunakidzwa nekiyi nyowani inodzivirira zvemultimedia zvemukati kuti zvisatambe zvega (zvakaremara nekutadza) kana mashandiro akanaka, kunyanya pamakomputa asina RAM yakakwana.
Chero zvazvingaitika, isu tatova neshanduro nyowani yeFirefox uye hatichafanirwe kunetseka nezvematambudziko ataurwa mune ino posvo.
Firefox 66.0.1 inowanikwa, inogadzirisa zviviri zvakakomba kusagadzikana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox 66.0.2 inosvika kugadzirisa zvakasiyana siyana zvewebhu
Iwe unogona ikozvino kuyedza yekutanga beta yeUbuntu 19.04 uye zvese zvinonaka